Vaovao - Famintinana miasa 2020, fanantenana vaovao ho an'ny 2021
Famintinana miasa 2020, fanantenana vaovao ho an'ny 2021
Tampoka teo, dia hifarana ny 2020. Amin'ity taona ity, ny fihetsem-pon'ny tolona dia mameno ny ranomasontsika, ary ny fanahin'ny tolona dia manangana ny hazondamosin'ny firenena. Na inona na inona zavatra niainantsika, dia ny traikefa sy ny fitomboana nomen'ny taona antsika. Tokony ho feno fankasitrahana isika ary hanome fanajana ny taona 2020.
Na dia mavitrika aza isika ary manery ny asan'ny COVID-19, dia tsy tokony hohadinointsika ny manomboka ny fontsika ka hitadidy ny iraka ataontsika. Tokony hampivondrona ny mpiasa, ny mpamatsy ary ny mpanjifantsika handroso sy hanavao, ary handroso ny karazana fampandrosoana.
Tamin'ity taona ity, teo ambany fitarihan'ny orinasa marina, nampiray sy namory ny vahoaka marobe izahay, nanamarika ny tenanay ary nanatsara hatrany. Fomba fiasa vaovao: mitaingina ny rivotra sy ny onja, mandroso tsy tapaka; rafitra fitantanana famokarana mandeha ho azy sy manan-tsaina an'ny Ny fonosana fonosana fidiovana dia tsy ny fanatsarana ny rojom-pamokarana sy ny rojom-panolorana ihany, fa ny fanavaozana tsy miankina sy ny famokarana tena ihany koa, mamorona ny birao fohy ary manamboatra ny birao lava. Miaraka amin'ny fampiharana ny "teknolojia, fitantanana, kalitao, serivisy ary marketing", ny fahaiza-manavao, ny fifaninanana amin'ny tsena ary ny tanjaka feno an'ny orinasa dia nohatsaraina hatrany, manasongadina ny fanahin'ny orinasa.
Ao amin'ny 2021, mifototra amin'ny dingam-pampandrosoana vaovao, Fengcheng Zhonghe Paper Products dia hampihatra ny fotokevitra fampandrosoana vaovao ary hanangana lamina fampandrosoana vaovao. Miaraka amin'ny lohahevitra fampiroboroboana ny fampandrosoana avo lenta, dia nanohy ny "manatsara ny tenany amin'ny alàlan'ny benchmarking" ary mampihatra ny fahaizany anatiny ary mamerina mamorona ny fahaizany. Nikiry tamin'ny fanekena marina ny fanovana izy, mamaly siantifika ny fanovana ary mikatsaka fanovana mavitrika, mamorona fotoana vaovao ary mamorona fampandrosoana vaovao hisorohana sy hiadiana amin'ny risika.
Ny ony lava misy ny tantara dia miakatra, miaraka amin'ny onja tony sy onja misamboaravoara. Tsy matahotra ny rivotra sy ny orana isika ary tsy matahotra ny loza. Raha mbola mitazona hatrany ny toetra azo ampiharina amin'ny "firaisan-kina ho iray isika ary hiasa mafy" sy ny fanahin'ny mpiady "izay sarotra kokoa sy mampidi-doza kokoa no handroso", dia hahatratra ny tanjona lehibe amin'ny fananganana firenena maoderina sosialista amin'ny rehetra -Misy làlana.
Saron-seza fivoahana 1/4 mivalona, Fonosana fonosana taratasy fidiovana taratasy,